Warbixino | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL Warbixino – Page 15 – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
XOG SIR AH: Ma dhab-baa in Mukhtaar Roobow loomagacaabayo Taliye ciidan & Saldhigyo Baydhabo kuyaal oo la geeyey?
BAYDHABO(P-TIMES)- Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa booqashada Mukhtaar Roobow Cali oo horey uga tirsanaa Al- Shabaab, haddana isku dhiibay dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, kaas oo booqasho ku maraya gobalada Baay & Bakool. Warar madax banaan ayaa sheegaya in uu Mukhtaar Roobow shalay codsaday in la geeyo goobo gaar ah oo kuyaala duleedka magaalada Baydhabo, isagoo tagey Saldhigyo ciidan,...
WARBIXIN SIRDOON: Waa maxay Ujeedada Horjoogayaasha Al- Shabaab iyo Maleeshiyadii ugu badneyd u geeyeen Gobalka Gedo?
MUQDISHO(P-TIMES)- Warar dhanka Sirdoonka ah oo ay is dhaafsadeen laamaha Sirdoonka ee kahowlgala gudaha dalka Soomaaliya ayaa cadeynaya in horjoogayaashii Al- Shabaab ee kusugnaa gobalka Jubbada Dhexe ay iskaga hayaameen oo ay sadex maalmood ka hor ka baxeen deegaanadaas, una gudbeen dhinaca gobalka Gedo. Ilaha sirdoon waxay qirayaan in horjooga kooxdan ee hadda dhuumashada ku jira uu hogaaminayo...
XOG RASMI AH: PuntlandTimes oo ogaatay in Hogaamiyaasha Soomaalida ay iskugu yeertay Beesha Caalamku, maxaase lagala hadlayaa?
MUQDISHO(P-TIMES)- Warbaahinta Puntlandtimes oo inta badan dabagal kusameysa arrimaha siyaasadeed ee gudaha dalka ayaa ogaatay in uu jirro shir gaar ah oo dhexmaraya Madaxda Siyaasadda Soomaaliya & Beesha Caalamka, kaas oo si deg deg ah loogu yeeray Hogaamiyaasha Siyaasadda. Warsidaha ayaa helay xog-cadeynaysa in casumaada hogaamiyaashan loo diray ay dirtay Beesha Caalamka, isla markaasna uu shirkaas...
WAR DEG DEG AH: Maxaa ka soo baxay Shir gaar ah oo dhexmaray Dawladda, Isimadda & Ganacsatada Puntland, kana dhacay Boosaaso?
BOOSAASO(P-TIMES)- Kulamo xasaasi ah oo ay lahaayeen dawladda, Ganacsatada & Isimadda Puntland oo ka socday magaalada Boosaaso ayaa soo dhamaaday, iyadoo dib loogu balamay in lays kugu soo laabto, lana magacaabay guddi sadexda dhinac ah, loogana hadlayey sidii loo xalin lahaa cabasho ka timid qaar kamid ah ganacsatada Puntland. Isimadda ayaa ugu horeyntiiba amray in guud ahaanba la furo Ganacsiga...
MUUQAAL IYO XOG: Garoonka Diyaaradaha Garoowe ee la furayo Dhawaan & Fariin loo diray Qurbo-Joogta Puntland
GAROOWE(P-TIMES)- Garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ayaa dhamaad ku dhaw, waxayna dawladda iyo Shirkadda gacanta ku haysa dhismuhu cadeeyeen in la furi doono horaanta sannadkan nagu soo beegan, gaar ahaana bisha koowaad ee sannadka 2018-ka oo ay maalmo kooban naga xigaan. Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku guuleystay in uu ka dhabeeyo balan-qaadkisii ku...
WARAR CUSUB+XOG: Isimadda Puntland oo lakulmaya koox Abaabulan oo ka soo horjeeda Horumarka & Dibu dhiska Dekeda Boosaaso.
BOOSAASO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta Ganacsiga Puntland ayaa sheegaya in ay manta bilaaban doonaan kulamo ay yeelan doonaan Isimadda Puntland qaarkood oo kusugan magaaladaas iyo kooxo abaabulan oo Isku baheystay diidmada Horumarka & dibu dhiska Kaabayaasha dhaqaalaha ee Boosaaso. Isimadda Puntland ayaa qaarkood tagay magaalada Boosaaso, waxayna xooga saarayaan...
XOG CUSUB: Madaxtooyada Soomaaliya oo Xildhibaano badan u sameysay Balan-qaadyo iyo Gorgortan adag oo socda
MUQDISHO(P-TIMES)- Saacadihii ugu dambeeyey waa sii xoogeysanayaa mooshinka laga diyaariyey Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu heystay dambiyo kala duwan oo ay kaqoreen mudanayaasha baarlamaanka Faderaalka, laakiin is difaac adag ayey ku jirtaa Madaxtooyada. Madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisa siyaasadeed ayaa horey u diyaarsaday Xildhibaano ay u arkayeen kuwa difaaci kara,...
AKHRISO XOG XASAASI AH: Xildhibaanadii ugu faraha badnaa oo saxiixay Mooshin ka dhan ah M/weyne Farmaajo & Daad Siyaasadeed oo kusii jeeda Villa Soomaaliya
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee kasoo baxaya mooshin ka dhan ah Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegaya in ay ilaa hadda ku socdaan si xawli leh, ayna jiraan xildhibaanadii ugu faraha badnaa oo saxiixay mooshinkan. Wararka ayaa cadeynaya in hadda la bilaabay in saxiixa Xildhibaanada lagu bixiyo lacago fara badan, gaar ahaana xildhibaan kasta lasiiyo $10,000 oo...
UPDATE: Dawladda Puntland oo si adag yga hadashay xog ay baahisay Shabakada Puntlandtimes.
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweyne kuxigeenka dawladda Puntland ahna kusinaha Madaxweynaha dawladda Puntland ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha Xukuumadda oo looga hadlah arrimo muhim ah. Golaha ayaa la horkeenay warbixino ay soo gudbiyeen laamaha Amniga ee Puntland, gaar ahaana qorshaha kooxaha Argagixiso kudoonayaan in ay kula dagaalamaan Puntland. Wasiirka Amniga ayaa u sheegay golaha in laqaaday...
WAR CUSUB: Puntland iyo Galmudug oo laga sugayo hirgalinta go’aamadii nabdeed ee shalay la gaaray.
GAALKACYO(P-TIMES) – Maamulada dhinac ee magaalada Gaalkacyo iyo waxgaradka ayaa lafilayaa in ay maanta fuliyaan go’aamadii ay shalay gaareen, kuwaas oo ku aadan xaaladda kajirta gudaha Suuqa ganacsi ee magaaladaas oo xirnaa maalmihii ugu dambeeyey. Ganacsatada ayaa lafilayaa in ay door wanaagsan ku yeeshaan sidii looga shaqeyn lahaa amniga, loona kala qaadi lahaa dableyda hubeysan. Is...
XOG CUSUB: Dawladdaha Puntland & Itoobiya oo qalinka ku duugay Heshiis ay mudo sugayeen Ganacsatada labada dhinac
ADDIS ABABA(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kusugnaa maalmihii ugu dambeeyey dalka Itoobiya, gaar ahaana magaalada Addis Ababa ayaa ku guuleystay in la dhaqaajiyo qorshaha furitaanka Kastamka ama Suuqa cusub ee Tuur-Dibi oo u dhaxeeya labada dhinac ee Itoobiya & Puntland. Ra`iisulwasaaraha dawladda Itoobiya ayaa amray Arbacadii lasoo dhaafay in dhamaan...
XOG CUSUB: Maxaa ka soo bixi kara Socdaalka Madaxweynaha Somalia ee dalka Imaaraatka Carabta, Yeyse saameyn doontaa?
DUBIA(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gaaray dalka Iskutaga Imaaraatka Carabta oo uusan wanaagsaneyn cilaaqaadka kala dhaxeeya dawladddiisa tan iyo markii la doortay sannadkan bilowgiisii. Madaxweynaha Soomaaliya in uu tago Imaaraatka markii labaad ayay u tahay, waxaana la rumeysan yahay in ay ka shaqeeyaan sidii arrintan u dhici lahayd wadamada...
WARBIXIN CUSUB: Saamayn intee la’eg ayuu Shiinaha ku leeyahay Zimbabwe?
Safar uu dhawaan dalka Shiinaha ku tagay taliyaha militariga Zimbabwe ayaa ahaa mid iska caadi ah oo lagu xoojinayay xiriirka xagga ciidammada ee labada dal, sidaasi waxaa sheegtay wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha kadib afgambigii Harare ka dhacay. Taliyaha Jeneraal Constantino Chiwenge ayaa Shiinaha booqday maalmo uun ka hor intii uusan dhicin afgambiga. Waxaa jiray warar aad la’isula dhexmaray...
FALANQEYN: Doorashada Somaliland Natiijada la filayo iyo Saameynta qabiilku ku leeyahay
Doorashada Madaxtinimo ee Somaliland, ayaa sanadkan ka duwan kuwii hore, madaama Olole adag uu dhex marey musharaxiinta xisbiyada u tartamaya xilka Madaxweynaha maamulka gooni isu taaga ah, gaar ahaan Kulmiye iyo Wadani. Warbaahinta ayaa u kuur-galay Doorashada, ayaa ogaaday in musharaxiinta labada xisbi lacag fara badan kaga baxdey tartankaan taasoo saameyn ku yeelaneysa natiijada codbixinta. Xog-ogaal...
WARBIXIN:- Sidee Dalalka Uganda, Itoobiya & Jabuuti Uga Jawaabeen Codsigii M/weyne Farmaajo ?
MUQDISHO(P-TIMES)-Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in ay kordhineyso Ciidamada ka jooga Soomaaliya ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ka socda Soomaaliya. Taliyaha guud ee Milatariga Dalka Jabuuti Zakariye Sheekh Ibraahim ayaa sheegay in Ciidamo dheeraad ah ay Jabuuti u direyso Soomaaliya. Zakariye waxaa uu sheegay in Jabuuti ay ka mid tahay Waddamada aqbalay codsiga Madaxweynaha Soomaaliya...
XOG SIR AH+SAWIRRO: Fahad oo Khatar Siyaasadeed ku ah M/weyne Farmaajo
MUQDISHO(P-TIMES)- Macluumaad Sirdoon oo ay isku gudbiyeen dawladdaha daneeya Arrimaha Soomaaluya, gaar ahaana Hay’addaha Sirdoonka ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray khataraha waa weyn ee ku hareeraysan Madaxtooyada Soomaaliya, si gaar ahna waxaa looga digay ficilada Madaxda dawladda Faderaalka qaarkood sameeyeen. Warbixin lagaga hadlayey qayb kamid ah taariikh nololeedka agaasimaha Madaxtooyada...
DAAWO KHUDBADO:- Madaxweyne Farmaajo Oo Si Adag Uga Hadlay Xaalada Dalka, Baaqna U Diray Dhalinyarada, Siyaasiyiinta & Shacabka Soomaaliyeed
MUQDISHO(P-TIMES)-Madaxwenaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, Mas’uuliyiin ka tirsan Goleyaasha shacabka, Aqalka sare, Golaha Wasiirada, Maamulka Gobolka Benaadir iyo mas’uuliyiin kale ayaa ka qeyb galay xaflad lagu daah furayay Ololaha Nabad gelyada Gobolka Benaadir, kaasi oo ka socoto xarunta dugsiga tababbarka Jeneraal Kaahiye ee magaalada...
Midoowga Afrika ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay in ay bilaabayaan in ciidammada nabad illaalinta AMISOM ay ka baxayaan Soomaaliya sanadkan dhammaadkiisa. Tirada askarta baxaysa sanadka waa kun askari, waana tiro aad u yar marka laga qiyaas qaato tirada guud ee AMISOM ee Soomaaliya ku sugan oo gaaraysa 22 kun oo askari. Balse waxa ay ahayd war lama filaan ah oo dhegaha Soomaalida ku cusub 10kii...
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxwenaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in uu ka hor caawa saqda dhexe magacaabo taliyaha ciidamada Nabadsugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya, ka dib markii todobaadkii hore shaqada laga ceyriyey taliyihii hore. Madaxweynaah Soomaaliya ayaa la rumeysan yahay in uusan ku faraxsaneyn go’aankii shaqada looga joojiyey Taliyihii hore oo...
Kadib is-casilaadda ra’isul wasaarihii lebnon Sacad Al-xariiri, faragelinta uu ka sheegtay in dalal badani ku hayaan Lebnon iyo isku-deyga dil uu ka badbaaday kadib markii xukuumadiisa ku guul-dareysatay hub ka dhigista maleeshiyaadka iyo kooxaha hubeysan, waxaa ii soo baxay 7 qodob oo ay iskaga mid yihiin Lebnon iyo Soomaaliya. Qodobadan 2 ka mid ah waa laga soo gudbay, laakin 5-ta qodob ee ugu...